आफ्नो ग्रेड प्रविष्ट गर्नुहोस् र आफ्नो आवश्यक अन्तिम ग्रेड प्राप्त गर्नुहोस्
तपाईंको हालको ग्रेड
उत्तर पाना सिर्जना गर्नुहोस् उत्तर पाना स्क्यान गर्नुहोस् ग्रेड क्यालकुलेटर ग्रेड प्रतिशत OMR पाना PDF GPA क्याल्कुलेटर Create Survey Scan Survey
तपाईले हाम्रो अन्तिम ग्रेड क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अन्तिम परीक्षा ग्रेड गणना गर्न जुन तपाईले चाहानु भएको समग्र पाठ्यक्रम ग्रेड प्राप्त गर्न आवश्यक छ। हाम्रो क्याल्कुलेटरले तपाइँसँग हालको प्रतिशत अंक प्रविष्ट गर्न आवश्यक छ जुन तपाइँसँग हाल यस पाठ्यक्रमको लागि छ, साथै प्रतिशतको रूपमा अन्तिम परीक्षाको वजन।
पाठ्यक्रमको लागि आवश्यक अन्तिम ग्रेड गणना गर्न, पहिलो फिल्डमा हालको ग्रेड, दोस्रो इनपुट फिल्डमा इच्छित ग्रेड, र अन्तिममा अन्तिम ग्रेडको वजन प्रविष्ट गर्नुहोस्। सबै मानहरू प्रविष्ट गरेपछि, परिणामहरू प्राप्त गर्न "गणना गर्नुहोस्" बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। अन्तिम ग्रेड क्यालकुलेटरले आँखा झिम्काउँदा सबैभन्दा सही परिणामहरू प्रदान गर्दछ। उसले तपाईंलाई अन्तिम परीक्षाको लागि आवश्यक ग्रेड बताउनेछ। सबै गणनाहरू निःशुल्क छन्।
अन्तिम ग्रेड कसरी गणना गर्ने
प्रश्नहरुको संख्या प्रविष्ट गर्नुहोस्
तपाईंको परीक्षण, परीक्षा वा प्रश्नोत्तरमा प्रश्नहरूको कुल संख्या प्रविष्ट गर्नुहोस्।
गलत उत्तर को गणना प्रविष्ट गर्नुहोस्
गलत उत्तरहरूको संख्या टाइप गर्नुहोस्।
केहि सेकेन्ड पर्खनुहोस्
परिणाम, प्रतिशत, अंश र अक्षर स्कोर सहित गणना गरी प्रदर्शित हुनेछ।
परिणाम प्राप्त गर्नुहोस्
ग्रेड वितरण चार्ट प्रदर्शन गर्न द्रुत चार्ट चेकबक्स प्रयोग गर्नुहोस्।
अन्तिम ग्रेड के हो?
अन्तिम ग्रेड भनेको पाठ्यक्रमको लागि लक्षित ग्रेडमा पुग्नको लागि अन्तिम परीक्षामा आवश्यक पर्ने ग्रेड हो।
म आवश्यक अन्तिम ग्रेड प्रतिशत कसरी गणना गर्छु?
तपाईंले सूत्र प्रयोग गरेर अन्तिम परीक्षामा स्कोर गर्न आवश्यक न्यूनतम ग्रेड गणना गर्न सक्नुहुन्छ: आवश्यक = (लक्ष्य - वर्तमान × (100% − अन्तिम वजन)) / अन्तिम वजन
के म लिनक्स, म्याक ओएस, वा एन्ड्रोइडमा अन्तिम ग्रेड गणना गर्न सक्छु?
अन्तिम ग्रेड क्यालकुलेटरले अनलाइन काम गर्छ र कुनै सफ्टवेयर स्थापना आवश्यक पर्दैन।
छिटो र सजिलो अन्तिम ग्रेड क्याल्कुलेटर
तपाइँको डाटा प्रविष्ट गर्नुहोस् र तपाइँलाई आवश्यक अनुमान गणना गर्नुहोस्। थप जानकारीको लागि, मूल्याङ्कन तालिका हेर्नुहोस्।
जहाँबाट पनि अन्तिम ग्रेड गणना गर्नुहोस्
अन्तिम ग्रेड क्याल्कुलेटर गुणस्तर